गृहमन्त्री ‛बादल’ सद्धाम हुसेन बनाइदै छन् या बन्दैछन ?–गोपाल किराती «
गृहमन्त्री ‛बादल’ सद्धाम हुसेन बनाइदै छन् या बन्दैछन ?–गोपाल किराती
प्रकाशित मिति : १२ भाद्र २०७५, मंगलवार १५:४७
केही दिन अघिदेखि नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‛बादल’लाई चाँडै बर्खास्त गरिने समाचार आइरहेको छ । समाचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्रीसँग सन्तुष्ट नभएको कुरा जोडेर बनाइएको छ । । यसको बास्तविकता विस्तारै खुल्दै जानेछन् । तर, अहिले भने हामीले एक विश्लेषणलाई पढ्नै पर्ने भएको छ । जुन विश्लेषण गोपाल किरातीेले आफ्नो फेसबुक स्टाट्समा पोस्ट गरेका हुन् ।
उनले मिडियामा आएका समाचारलाई आधार मान्दै, के–हो बादल माथिको बर्खास्ती कारबाही ? भनी सामान्य प्रश्न गरेका छन् । तर त्यो सँगैको दोेश्रो प्रश्न भने गम्भिर अनि विश्लेषणात्मक छ । जहाँ उनले बादललाई सद्धाम हुसेन बनाइदै छन् या बन्दैछन् ? भनी प्रश्न गरेका छन् । उनले सन् १९९० को युद्धमा सद्धाम हुसेनसँग ECM प्रविधि भएकाले दुश्मनसँग जितेको प्रसंग कोट्याएर ‛बादल’लाई सुटुक्क साउती गरेका छन् । भने, ECCM नामको प्रविधि विकास गरेर अमेरिकाले इराक (सद्धाम) लाई हराएको प्रसंगले ओलीलाई प्याच्च घोचेका छन् । अन्तत : उनी गुप्तचर विभाग गृहमन्त्रीको आँखा र कान भएपनि प्रधानमन्त्रीद्धारा खोसिएकाले ‛बादल’ विरुद्ध कारवाही भएको निश्कर्षमा पुगेका छन् ।
किरातीको स्टाटस :
‛के हो, बादल माथिको बर्खास्ती कार्वाहि रु समाचार पढियो –१९९० को युद्धमा सद्दाम हुसेनसँग ECM प्रविधि थियो । जसले आउदै गरेको दुश्मनको जहाज ,त्यसको भार–क्षमता ,उचाई र गति समग्र बताउथ्यो र इराकी सेनाले अचुक निसाना मार्दै दुश्मनको जहाज खसालेर जित्थे । तर ECM लाई निष्तेज तुल्याउने ECCM नामको प्रविधि विकासद्वारा अमेरिकाले पुनः हमला गर्यो ,इराक पराजीत भयो । गुप्तचर विभाग गृहमन्त्रीको आखाँ र कान हो । जुन खड्ग ओलीले खोसेर लगे । त्यसैबेला बादल विरुद्ध कार्वाहि भएको हो । यसरी बादल सद्दाम हुसेन बनाईदै छन् या बन्दैछन् ?’